Banyere Anyị - Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.
Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ nkwonkwo na ngwaahịa na-agba ọsọ dịka ihe achọrọ na usoro maka ụlọ ọrụ edepụtara, ụlọ ọrụ na-ejide ya bụ HONGTAI GROUP. Dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ na-arụpụta ihe mejupụtara aluminom na China, Alutile lekwasịrị anya na nyocha, imepụta, ire ahịa na ọrụ nke mgbidi mgbidi karịa ihe karịrị afọ 20. KPỌỌ jide ikike nnwere onwe ọgụgụ isi zuru oke maka ọtụtụ ngwaahịa.
Na ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ n'ichepụta ákwà mgbochi-mgbidi ogwe na oge mmewere nke eco-enyi na enyi & ngwa ọhụrụ, anyị tinyere onwe anyị na-enye elu àgwà ngwaahịa maka ndị ahịa. Ngwaahịa anyị gụnyere Aluminom Composite Panel, All Dimensional Aluminium Core Panel (3A panel), Solid Aluminom Panel, Thermal mkpuchi Sandwich Panel, Environmental Decorative Panel, Silicon Sealant Glue etc.
Dị ka ndị isi sayensị na nnyocha mmepe okpuru ulo nke China Construction Ministry, anyị ụlọ ọrụ nsị ukwuu e mesiri ike na sayensị na nkà na ụzụ na nlezianya àgwà akara. All akụrụngwa na imecha ngwaahịa na-nditịm nwalere site elu ngwá dị si American, Germany na Japan.
N'ime afọ 20 ike N'ezie, ALUTILE mepụtara na-eto eto na ngagharị na omume nzọụkwụ site nzọụkwụ, na metal ákwà mgbochi-mgbidi ihe a na-eresị karịa 100 mba na mpaghara gburugburu ụwa, na-kasị akpa enterprise na njem.
Otu n'ime drafter kachasị nke ọkọlọtọ mba maka aluminom plastic.
Ogologo ọzụzụ ọzụzụ ọzụzụ nke China aluminum plastic mejupụtara ihe ụlọ ọrụ
Sayensị na teknụzụ nyocha na ntọala mmepe nke Ministry of Science and Technology Information Research Institute
Ulo oru di elu nke ulo oru ochichi mba
Ntinye ego ntinye ego nke mba na-akwụ ụgwọ